किन हुँदैन भन्सालीसँग सलमानको सहकार्य? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०७८, सोमबार ४ : ०३
काठमाडौँ। केही समय अगाडि सञ्जयलीला भन्साली र सलमान खान प्याचअप भएको खबर बाहिर आयो। यद्यपि, उनीहरुले गर्ने भनिएको त्यो प्रोजेक्टले मूर्तरुप पाउन सकेन। सञ्जय र सलमानको मनमुटावकैबीच प्याचअप भएको खबरको चर्चा सेलाउन नपाउँदा फिल्म नै रोकियो।
सञ्जय र सलमानले ‘हम दिल दे चुके सनम’जस्ता फिल्म पनि दिएका छन्। त्यसपछि उनीहरुले सँगै काम गरेका छैनन्। सलमानले सञ्जयको फिल्म ‘सावरिया’मा केमियो भने गरेका थिए।
तर, दर्शकले बलिउडका भाइजान सलमानलाई भन्सालीको निर्देशनमा लभ स्टोरीमा हेर्न चाहेका छन्, जुन अझै पूरा भएको छैन। सञ्जयलाई उनको डेब्यु फिल्म ‘खामोसी’मा साथ् दिएका सलमानले ‘हम दिल दे चुके सनम’पछि भने साथ दिएनन्।
आखिर किन त? सलमान र सञ्जयको सहकार्यमा तयार भएको दोस्रो फिल्म आएर हिट भएको थियो। त्यसपछि सलमानले ‘साँवरिया’मा मात्र केमियो गरे। सलमान किन रिसाए त? दोस्रो फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ सुपरहिट भएपछि सञ्जयले तेस्रो फिल्मको तयारी थाले।
उनको तेस्रो फिल्म थियो ‘देवदास’। उक्त फिल्ममा सञ्जयले शाहरुख खानलाई लिए र सलमानसँग सल्लाह पनि गरेनन्। आफूले गाह्रो समयमा सञ्जयलाई सहयोग गरेको, तर सफल भएपछि उनले बेवास्ता गरेको लागेपछि सलमान सञ्जयसँग टाढिए।
त्यसपछि ‘साँवरिया’मा भने उनका मिल्ने साथी अनिल कपूरको आग्रहमा सोनाम कपुर र रणवीर कपूरको डेब्यु फिल्म भएकाले सलमान केमियो गर्न तयार भएका थिए। त्यसपछि सलमानले सञ्जयको धेरै फिल्मको अफरलाई अस्वीकार गरे।
तर, पछिल्लो समय सलमानले आफैँले लभ स्टोरीमा देखिने चाहना व्यक्त गरेपछि सञ्जयले सुनाएको स्टोरी मन परेकाले फिल्म गर्न तयार भएका थिए। त्यसले पनि निरन्तरता पाएन। पछिल्लो समय सलमानलाई दर्शकले प्रेम अवतारमा देख्न चाहेका छन्, तर त्यो पूरा हुन सकेको छैन।